IINGCAMANGO EZIPHEZULU ZE-63 ZE-TRELLIS - UYILO LWEKHAYA
Iingcamango eziphezulu ze-63 ze-Trellis
Igadi yindlela endiphumla ngayo. Enye enye indlela yokudala nokudlala ngemibala. -Oscar de la Renta
Ukuba ne-trellis egadini yakho kufana nokwenza umbala othe nkqo wombala ngaphezulu kwawo nawaphi na amagqabi kunye neentyatyambo. Yindlela yokwandisa isithuba segadi onaso. Ngokuya phezulu, awudingi ukubeka ezinye iziza okanye iibhokisi zegadi ukongeza ubuhle kwigadi yakho.
Ezinye zezona zityalo zintle kakhulu zezi zinyukayo. Uzuko lwasekuseni, ukunyuka kweentyatyambo, kunye neentyatyambo ezimnandi zepea zonke zidinga into yokuzibamba ukuze zikhule. Izityalo zekhukhamba, iimbotyi zepali, kunye nezityalo zetumato nazo zifuna ubume benkxaso. Yandisa indawo yakho yegadi ngokwamkela enye okanye ezingaphezulu kwezona zimvo zethu zintle kakhulu zeengcinga zeetrellis.
1. Iingcamango zeArbor Garden Trellis
Igadi Arbor sisakhiwo esongezwa kubume bomhlaba ukubonelela ngasese, indawo yokuhlala, okanye ukucaciswa phakathi kwemimandla eyahlukeneyo yegadi. I-arbor inokumiswa ngaphezulu kwendlela yegadi. Uphahla lwayo kunye neendonga zihlala zenziwe ngeepaneli ze-trellis okanye ii-slats ezithe tyaba ukuxhasa iintlobo zezityalo. IArbor ngumbono olungileyo we-trellis wokuxhasa umdiliya onyukayo kwigadi yemifuno okanye kwigadi yeentyatyambo.
Umthombo: @antheiachelan nge-Instagram
Umthombo: @belle_vue_renovation nge-Instagram
Umthombo: @casahortera nge-Instagram
Umthombo: @lisas_garden_therapy nge-Instagram
Umthombo: @livetpalahaugen nge-Instagram
Umthombo: @onevibration nge-Instagram
Umthombo: @ sisters.inthe_.garden nge-Instagram
Ukungena kwigadi entle, yakha i-arbor entlokweni yendlela kunye nokunyuka kweentyatyambo ngapha nangapha. I-Bougainvillea okanye i-clematis zinokhetho olunemibala ukuba ukhetha enye into ngaphandle kweeroses. Tyala umbala owahlukileyo okanye uhlobo lweentyatyambo ezinyukayo kwicala ngalinye, kwaye ekugqibeleni ezi zimbini ziya kudibana ngaphezulu kwearbor yakho zibe ngumbala omnye omangalisayo.
2. Iingcamango zeGreat Trellis Ideas
Ukuba ufuna umbono we-trellis yegadi ogqitha ngaphaya kweenkuni okanye iigridi zentsimbi, unokukhetha okuninzi onokukhetha kuzo. Ipeyinti inamathela kwimibala eqaqambileyo kunye neepateni kwaye uzibophelele kunye negadi yeewayini uyilo olumibalabala lodonga lwe-trellis. Cwangcisa iziqwenga zemiqadi yeplanga kwipateni enamacala amathandathu endaweni yegridi, uyilo olufana nobusi.
Umthombo: @boiserivercreations nge-Instagram
Umthombo: @ dreams_life_22 nge-Instagram
Umthombo: @home_of_roberts nge-Instagram
Umthombo: @ maker956 nge-Instagram
Umthombo: @ michelle_atno18 nge-Instagram
Umthombo: @terrasculpture nge-Instagram
Umenzi weenkuni angayila ubume obukhethekileyo be-trellis yegadi yakho, okanye ungaphanda ngezimvo zoyilo lwegadi ye-DIY kunye nokwakha into eyahlukileyo ngokwakho. Ukuphinda ubeke intonga yokugcina amakhethini kwiitumato okanye kwiintyatyambo ngokuzifaka kocingo okanye eludongeni.
Ivili lenqwelo lenkuni lenza i-DIY trellis yoyame eludongeni. Ngengcamango ye-trellis yegadi ye-whimsical, yima izixhobo ezirusiweyo okanye ezaphukileyo kwigadi uze udibanise izityalo zakho zomdiliya zinyuke.
3. Iingcamango ze-DIY Garden Trellis
Isitayile seteepee trellis yenye yeendlela ezilula nezindala zoyilo lwegadi ye-trellis yegadi. Mane nje ugrumbe ezintathu okanye nangaphezulu iipali ezomeleleyo zomthi okanye zoqalo emhlabeni. Boyame embindini kwaye ubabophe ngokudibanisa intambo okanye intambo. Vala intambo okanye intambo ejikeleze ubume, njengoko ubuya kwenza umthi weKrisimesi.
Umthombo: @downbythelottie nge-Instagram
Umthombo: @freshearthgardens nge-Instagram
Umthombo: @lexiceaglske nge-Instagram
Umthombo: @wedge_antilles nge-Instagram
Umthombo: @westaywildofficial nge-Instagram
Olunye uyilo olulula lwe-DIY lwe-trellis yindlela yohlobo lwentente. Ngokufanayo ne-teepee, olu lwakhiwo lusebenzisa iipali ezomeleleyo ukwenza isakhelo esifana nentente apho uncamathisela khona iintambo okanye iipaneli zentsimbi ukuze izityalo zakho zinyuke. Ezi zezona squash zintle okanye ulwakhiwo lwekhukhamba kwigadi yemifuno, njengoko kubonisiwe kule vidiyo:
4. Iingcamango ze-Garden Trellis
Yenza isahlulo socingo lwakho ngaphandle kwe-lattice okanye usebenzise iipaneli ze-lattice ze-trellis kwifowuni yakho yonke yegadi. Ukunyuka kwama roses, i-honeysuckle, isiNgesi ivy, kunye namaqunube amnyama zizityalo zonke ezintle ezikhula ecaleni kocingo lwe trellis. Ngokuhamba kwexesha, unokuphelisa ucingo oluhlala kuyo, kungabikho nto ebonakalayo ebonakalayo phakathi kwezityalo zakho ezinyukayo. Qiniseka ukuba unqanda nayiphi na imidiliya ukuba ingakhuli kwisango lakho, okanye uya kuba nengxaki yokungena nokuphuma.
Umthombo: @butterwakefield nge-Instagram
Umthombo: @georgialindsaygardendesign nge-Instagram
Umthombo: @hedgeoverheels nge-Instagram
Umthombo: @joinusoutside nge-Instagram
Umthombo: @ourleith nge-Instagram
Inkqubo elula ye-trellis inokwakhiwa ecaleni komthi okhoyo ucingo lwabucala . Yenza okufutshane, ibhedi yegadi ephakanyisiweyo ecaleni kwezantsi kocingo ukuze ubeke izityalo zakho ezinyukayo. Ubungakanani beendawo ezivulekileyo zegridi bumisela ubungakanani babucala obubonelelwe ngocingo lwe-trellis yakho, olunokuthi lungabi lukhulu kude kube kuvuthwa isityalo.
5. Izimvo ezizimeleyo zeGadi yeTrllis
I-trellis entle ezimeleyo inokuyilungisa yonke igadi yakho, isebenze njengeyona ndawo iphambili eyenza ukuba iyadi yakho ime ekuhlaleni. Ingenziwa nangantoni na enesakhiwo esivulekileyo sokunyuka kwezityalo. Guqula umgaqo kaloliwe wakudala ube yindawo ehamba ngokukhululekileyo, okanye ubophe iileli ezimbini ze-antique kunye phezulu phezulu kwi-trellis eyahlukileyo yomthi yokuxhasa izityalo zakho zetumato okanye iimbotyi zepoli.
Umthombo: @art_and_oak nge-Instagram
Umthombo: @huongoldtasmania nge-Instagram
Umthombo: @knotcommonwood nge-Instagram
Umthombo: @lone_star_curb_appeal nge-Instagram
Umthombo: @rontangoart nge-Instagram
Umthombo: @shazmojo nge-Instagram
Umthombo: @the_crusty_ledge nge-Instagram
I-French tuteur okanye i-obelisk trellis iyafana ne-teepee trellis, kodwa icace ngakumbi. Iineendonga ezine zeepaneli zeleti ezihlangeneyo ezihlangana phezulu. I-obelisk trellis isebenza kakuhle kwibhedi encinci yegadi, ibonelela ngendawo eyaneleyo yokulima xa indawo ethe tyaba incinci. I-obelisk inokwenza intliziyo yegadi encinci ekhitshini ngelixa ixhasa iitumato okanye ii-ertyisi.
6. Izimvo ze-Garden Arch Trellis
I-trellis emhlophe eyenziwe ngomthi egutyungelwe iiroses yinto yoyilo lwegadi yakudala. Rhoqo ibekwe ekungeneni kwegadi, okanye embindini wendlela egoso-goso, kukho into yomlingo malunga nokuhamba phantsi kwe-arch trellis entle egqunywe ziintyatyambo ezinuka kamnandi.
Umthombo: @notedsimply nge-Instagram
Iarch trellises nayo inokwenziwa ngesinyithi. Ezi zakhiwo zihlala zilula kuyilo kwaye ziyafumaneka kubathengisi beebhokisi ezinkulu nakwiivenkile zokuphucula amakhaya. Ngelixa iinguqulelo ezisisiseko zingabizi kakhulu, izixhobo zetsimbi eneenkcukacha ze-arch inokufumaneka kwindawo ephezulu yeendleko. Zombini ezi ntlobo kulula ukuba zihlangane kwaye zisebenze kakuhle ukuxhasa ivy kunye nabanye abakhweli.
7. Iingcamango zeLatice Garden Trellis
Iiphaneli zemigangatho yeplanga ezifumanekayo ziyafumaneka nakweyiphi ivenkile yasegadini okanye iziko lokuphucula ikhaya. Yenza iiphaneli zocingo ngomngxunya wokhuni, okanye ubambe indawo ende, emxinwa yelitini eludongeni okanye ucingo oluyimfihlo. Oku kongeza umnxeba wokuhombisa ngelixa uvumela abakhweli bakho ukuba babambe.
Umthombo: @albert_bebe_kitkat_neko_smudge nge-Instagram
Umthombo: @butterlaw_farm_steading nge-Instagram
Umthombo: @joshuasear__barlowandbarlow nge-Instagram
Umthombo: @ our_rempstone16 nge-Instagram
Umthombo: @ sarah_sally.burns_ nge-Instagram
Umthombo: @stephencharleslandscapes nge-Instagram
Umthombo: @thelittleblackandwhitecat nge-Instagram
Umthombo: @thenorfolkgarden nge-Instagram
Inqanawa ngebhotile ye tattoo intsingiselo
Sebenzisa i-twine yegadi ukudibanisa iipali ze-bamboo kunye kwipateni yegridi ukwenza i-lattice trellis eqinileyo. Ngokukodwa intle kwiigadi eziphefumlelweyo zaseAsia, i-bamboo trellis archway okanye i-pergola izandi zilula kwi-DIY kodwa inokubandakanya inqanaba eliphakathi ukuya phezulu kwizakhono ze-DIY.
8. Iingcamango ze-Metal Garden Trellis
Isinyithi senza ulwakhiwo olomeleleyo lwe-trellis. Iipaneli zentsimbi eziluncedo ziluhlobo olukhulu lweetamati okanye i-pea trellis, esetyenziswa kwigadi yemifuno apho umsebenzi ubaluleke ngaphezu kokubonakala. Unokuthenga iiarches zentsimbi ezilula ukubeka ngaphezulu kwendlela yegadi okanye ibhedi ephakanyisiweyo yegadi. Jonga iivenkile ezithengisayo okanye iivenkile zeantique zentsimbi ye-antique yentsimbi eyenziwe ngeentsimbi zokucoca-okanye ukonwabela i-patina yabo esele indala.
Umthombo: @irongateinteriorsllc nge-Instagram
Umthombo: @ jdowens_1216 nge-Instagram
Umthombo: @littlenurturedgarden nge-Instagram
Umthombo: @ mindys.vintage.soul_ nge-Instagram
Umthombo: @ steady.as_.she_.grows_ nge-Instagram
Umthombo: @theolive_blossom nge-Instagram
Umthombo: @willadsendesign nge-Instagram
Ukuba unohlahlo-lwabiwo mali olunomdla, nxibelelana nomsebenzi wesinyithi, isinyithi, okanye umbazi wesinyithi ukukunceda uyile i-trellis yesinyithi eyahluke kwaphela. La magcisa anokwenza iipaneli zesinyithi okanye izakhiwo zentsimbi ezinje ngomdiliya ukuxhasa izityalo zakho ezinyukayo. Ukuba awunakufumana umsebenzi onesinyithi onesakhono, jonga kwi-intanethi okanye kwiivenkile ezithengisayo ukuze ufumane i-trellis yentsimbi esetyenzisiweyo. Ezinye izinto ezidityanisiweyo zinokujikwa zibe yimithi emikhulu yokugcina izityalo zakho ezikhulayo zibambelele kuzo.
9. Iingcamango zePergola Garden Trellis
Abantu bahlala bedida iiarbors zegadi kunye nepargolas, kodwa ziindidi ezimbini ezahlukeneyo zezakhiwo. I-pergola ihlala inamacala avulekileyo kunye nophahla olusicaba. I-arbor ihlala inezithuba ezine, ngelixa i-pergola ingaphezulu kwesine. I-pergola ingabonakala ngathi yindlu encinci, evulekileyo evulekileyo, okanye uthande ibhulorho egutyungelweyo eyakhiwe ngaphezulu kwecandelo lendlela yakho yegadi.
Umthombo: @ay_shjain nge-Instagram
Umthombo: @townplacegarden nge-Instagram
Umthombo: @westgreenhouse nge-Instagram
I-Pergolas zihlala zikhulu ngokwaneleyo ukuba zigubungele itafile kunye nezitulo okanye enye indawo yokuhlala. Ukufezekisa ngokutya kwasehlotyeni okanye ipati yentombi yakho, iperola egutyungelwe kwimidiliya yeentyatyambo yinto egadiweyo yothando. I-pergola inokubonelela ngomthunzi owamkelekileyo kwigadi yemifuno xa ilixesha lokuvuna intabalala yakho.
10. Iimbiza ezincinci kunye neeGadi eziphakanyisiweyo
Ibhedi yegadi ephakanyisiweyo sisiseko esifanelekileyo somyezo wegadi. Nokuba igadi encinci yesikhongozeli inokuxhamla kulwakhiwo oluncinci lwe-trellis. Ukutyala into enokuhamba kunye nokunyuka, njenge-English ivy, okanye ukongeza ubuqaqawuli bentsasa obushushu ukunyuka uphume embizeni yeerandium ebomvu.
Umthombo: @elizabethandpenn nge-Instagram
Umthombo: @farmsteadgarden nge-Instagram
Umthombo: @ twisted.stem_.plant_.trellises nge-Instagram
Indlela entle yokuphinda usete iseti yamaplanga amadala okanye izitulo zentsimbi ezingenamqolo kukuzisebenzisa njengokuhamba kwegadi. Zibeke nje phakathi kwayo nayiphi na imibhede yegadi ephakanyisiweyo ebandakanya ukunyuka kwezityalo. Imivini iya kunyuka imilenze emide kwaye ungongeza ipizazz ngokubeka umfanekiso omncinane okanye ukujonga ibhola esihlalweni ngasinye. Unokugoba iimpahla zentsimbi ezixhonywe kwiimo ezizodwa kwaye uzicwangcise njengama-lattices kwizityalo ezincinci ezinamanzi.
11. Iingcamango zeWall Garden Trellis
I-Trellises yindlela elula yokuhlobisa icandelo elingenanto leendonga zangaphandle zekhaya lakho. Ungathenga iipaneli ze-trellis esele zenziwe ezenziwe kwizinto ezahlukeneyo zokunyuka kwiindonga zakho. Ukuba uluncedo, kulula ukwenza udonga lwamagadi ngaphandle kweepellethi zomthi, njengoko kubonisiwe kule vidiyo:
Umthombo: @lovehomewebb nge-Instagram
Umthombo: @thebluedoorsociety nge-Instagram
Ukuba sele sele uzinzile kakuhle izityalo ezinyukayo, unokuxhoma udonga lwakho lwe-trellis ngaphezulu komgangatho womhlaba. Ngethuba nje ukuba abagibeli bakho banokunamathela kwisitimela esiphantsi, baya kubamba kwaye kungekudala bazalise isakhiwo sonke.
Udonga lwegadi emile ngathi ngumdonga yinto eklasikhi kwaye ijongeka inomdla ngakumbi kunesikwere esisiseko okanye iigridi ezixande zodonga. Yenza i-trellis yakho yodonga lwegadi ime ngokupeyinta okanye uyonakalise umbala othelekisa ukugqitywa kodonga.
12. Iingcamango zocingo kunye neMesh Garden Trellis
I-trellis yocingo yenye yezona zimvo zokuqala zegadi. Enye yeentlobo ze-DIY ze-trellis ezilula ukuzenza, konke okufunekayo kukuma ngezithuba zomthi egadini kunye nokuhambisa ucingo phakathi kwabo. Ngelixa kunokuba kungabonakali kangako ngaphambi kokuba izityalo zakho ezinyukayo zithathe indawo, zinokuba zizakhiwo ezizinzileyo ezisetyenziswa unyaka nonyaka. Izidiliya ezininzi zisebenzisa ucingo olufanayo lwe trellis kwizizukulwana.
Umthombo: @acquired_by_andrea nge-Instagram
Umthombo: @insitestudiodeign nge-Instagram
Umthombo: @kandishargrave nge-Instagram
Umthombo: @loujatras nge-Instagram
Umthombo: @smilecrescent nge-Instagram
Umthombo: @ standing.pine_.acres_ nge-Instagram
I-wire mesh trellis lolunye uhlobo olungabizi kakhulu lwe-DIY trellis enokwenzeka nokuba ngabalimi abaninzi abasakhasayo. Iphakathi kweyona miba mincinci ye-trellis yezimvo-xa ingenanto.
Xa ugqunywe ziintlobo ezintle zezityalo ezinyukayo, nangona kunjalo, kunokuba ngumbono ukubona. Ukuthabatha ngobuchule kwi-mesh trellis yocingo, gcwalisa ifreyimu ye-antique kunye nocingo lweenkukhu uze uyixhome ngaphezu kweentyatyambo ezinyukayo okanye izidiliya.
Izimvo zophahla lwepatio (imifanekiso)
izimvo zodonga olubomvu nolumhlophe
izinto wonke umntu anazo
Ihempe enxibe ibhulukhwe yekhakhi
indawo yokubasa ilitye enemenen emhlophe